बेष्ट फाइनान्सको खराब कर्जा अनुपातमा व्यापक सुधार, नाफामा ३१.४३%को छलाङ Bizshala -
Skip Now 5
Scroll To Read News
समाचार पढ्न स्क्रोल गर्नुहोला
कोरोनासँग जुझ्न भारतमा प्रधानमन्त्रीसहित सांसदको ३०% तलब कटौती
लकडाउनको समयमा सुरक्षा अपनाएर विकास निर्माणका काम गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारलाई आग्रह
लकडाउनले ४३ करोड बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित, विद्युतीय माध्यमबाट पढाउन सुझाव
नवनियुक्त गभर्नर अधिकारीद्वारा सर्वोच्चमा सपथ ग्रहण, आजै पदबहाली
बेष्ट फाइनान्सको खराब कर्जा अनुपातमा व्यापक सुधार, नाफामा ३१.४३%को छलाङ
समाचार लोड हुदै छ, कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोला ...
काठमाण्डौ । बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म खराब कर्जा अनुपातमा व्यापक सुधार गरेको छ।
दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले खराब कर्जा अनुपात ७.०२ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म २१.७० प्रतिशत खराब कर्जा अनुपात रहेकोमा समीक्षा अवधिमा घटेर १४.६८ प्रतिशतमा झरेको छ।
यसैगरी समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीको कस्ट अफ फन्ड पनि घटेर ९.४१ प्रतिशतमा झरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीको कस्ट अफ फन्ड ९.९३ प्रतिशत थियो।
कम्पनीको आधार दर १३.९८ प्रतिशतमा झारिएको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीको आधार दर १४.३० प्रतिशत थियो।
दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले खुद नाफा ३१.४३ प्रतिशतले बढाउँदै ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीको खुद नाफा ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा ६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा ५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
कम्पनीले १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा तयार पारेको छ।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो।
कम्पनीले रिजर्भको आकार १६.६६ प्रतिशतले बढाएको छ। गत वर्ष २८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको रिजर्भमा बढेर ३३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
best finance limited Q2 2076/77
देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै के-के भने प्रधानमन्त्रीले ? (पूर्णपाठ)
क्वारेन्टाइनमा नबस्ने नागरिकलाई प्रमको सम्बोधन, ‘तपाईको एउटा गल्ती देशका लागि महङ्गो पर्नसक्छ’
स्वास्थ्य उपकरणमा भएको अनियमितता बेमौसमी बाजा मात्र: ओली
लकडाउन अझै बढ्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत
के साँच्चै तुर्केमेनिस्तान कोरोनाभाइरसबाट मुक्त छ ? के हो वास्तविकता ?
करोडपति नै राहात लिनेको लाइनमा बसेपछि...
साधना लघुवित्तको ७ करोड हाराहारी आइपीओ आउँदै
काठमाण्डौ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले साधना लघुवित्त...
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक
काठमाण्डौ । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो...
एनएमबी लघुवित्तले डाक्यो चैत २६ गते वार्षिक साधारणसभा, बुक
काठमाण्डौ । एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो सातौँ...
स्वेडा लघुवित्त प्राप्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन मिर्मिरे
काठमाण्डौ । स्वेडा लघुवित्त प्राप्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन...
महिला सहयात्रा लघुवित्तले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक
काठमाण्डौ । लाभांश पारितको मुख्य अजेन्डासहित महिला सहयात्रा...
आइसीएफसी फाइनान्सद्वारा जारी ऋणपत्र ओभरसब्सक्राइब
काठमाण्डौ । पहिलोपटक आइसीएफसी फाइनान्सले जारी गरेको ऋणपत्रमा...
एनएमबी लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीबाटै लाखौं रकम अनियमितता
रासस काठमाण्डौ । एनएमबी लघुवित्त कार्यालय चामेमा कार्यरत कल्पना...
ग्रामीण विकास लघुवित्तको अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी :
काठमाण्डौ । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको...